न्यायाधीशले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक, न्यायपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाइयो
काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्लाका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यावसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घुस लेनदेनबारेको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
न्यूज २४ टिभीले मंगलबार साँझ न्यायाधिश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीचको करिब १० मिनेटको अडियो सार्वजनिक गरेको हो ।
यो विषय सम्बेदनशील भएको सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बहस भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बुधबार दिउँसो न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
सार्वजनिक भएको अडियोमा तामाङलाई १० करोडमा छुटाउँदा २ करोड आफूहरुलाई आउने अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधिश कोइरालालाई भनेका छन् । त्यसमा कोइराला आफू तयार रहेको तर माथिल्लो निकायबाट पनि जानकारी आउनुपर्ने शर्त राखेको सुन्न सकिन्छ ।
अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुखसम्मलाई आफूले मिलाउने अडियोमा बताएका छन् ।
यो अडियो सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्यायाधीश कोइरालालाई बुधबार कुनैपनि इजलास तोकेको छैन ।
यो घुसको डिल भएको समय, २०७८ पुसमा उनी नेपाल बार एशोसिएसनको कोषाध्यक्ष थिए । न्यायाधीश कोइरालासँग घुसको डिल गरेको वार्तामा अधिवक्ता पोखरेलले आफूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामार्फत् जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई भन्न लगाउने आश्वासन दिएका छन् ।
उक्त समयमा नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन आएको भन्दै उनको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा थियो। अधिवक्ता पोखरेल भने खुलेरै बारको आन्दोलनको विरोधमा र प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा लागेका थिए ।
ओलीले दायर गरेको रिटको पेशी न्यायाधिशद्वय कार्की र खड्काको इजलासमा
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइको लागि आज पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा ओलीले एमालेले कारवाही गरेका १४
पूर्वमाओवादी चार नेताको रिट निवेदन न्यायाधिश डा. भट्टराईको एकल इजलासमा
काठमाडौँ । पूर्वमाओवादी चार नेताले आफ्नो सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा आज न्यायाधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा तोकिएको छ । यस अघि बिहीबार रिट निवेदन सुनुवाइका लागि
गायिका ब्रिटनीको न्यायाधिशलाई अपिल- मलाई मेरो जीवन फिर्ता दिनुस् !
काठमाडौँ । अमेरिकी गायिका ब्रिटनी स्पियर्स अदालतमा आफ्नो जीवन फिर्ता दिन अपिल गरेकी छन् । खुला अदालतमा बयान दिने क्रममा गायिका स्पियर्सले आफ्ना पिताले आफ्नो जीवनका सबै निर्णय लिएको भन्दै
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरूद्धका रिट न्यायाधिश खतिवडाको बेञ्चमा सुनुवाई हुदै
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आज सुनुवाई हुदै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने र विरेन्द्र प्रसाद शाहले